Rikoooo.com को इतिहास - Rikoooo
वेबसाइट ठेगाना : http://www.rikoooo.com
वेबसाइट प्रकृति : कम्प्यूटर हावा सिमुलेशन
दर्ता : नि: शुल्क, उपहार सम्भव छ
मालिक : एरिक Bender
सुरु वर्ष : 2005
1/ वास्तविक अवस्था
2/ पृष्ठभूमि इतिहास - Developpment - भविष्य
Rikoooo.com कम्प्युटरमा उडान अनुकार, ज्यादातर "Laminar अनुसन्धान" र "एक्स-विमान" बारे केही तत्त्वहरू संग, माईक्रोसफ्ट "उडान सिम्युलेटर" समर्पित समर्पित एक फ्रान्सेली वेबसाइट छ। Francesim.com गरेको खेद लोप भएकोले विशेष फ्रान्सेली प्रेस विषयमा प्रमुख फ्रान्सेली वेबसाइट रूपमा Rikoooo.com छलफल।
यो एक मुक्त दर्ता (साझेदारी को धारणा), यस्तो हवाईजहाज, seaplanes, हेलिकप्टर र कुनै पनि समय को ग्लाइडरहरू साथै sceneries रूपमा डाउनलोड, धेरै को विनिमय मा प्रदान गर्दछ। यी सबै फाइलहरू स्वचालित स्थापनाकर्ता सगइएको छ।
उड एयर मार्गहरू aeronautic, भौगोलिक, ऐतिहासिक र साहित्यिक सम्पदाको देखि आ उडान योजना को रूप मा, उपलब्ध छन्। यी मार्गहरू केही यस्ता YQUET-उड्डयन रूपमा नेटवर्क उडानहरू, व्यवस्थित वेबसाइट द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
tutorials र सुझावहरू एक धेरै पनि उपलब्ध छन्, एक धेरै सक्रिय मंच धन्यवाद; आन्तरिक खोज इन्जिन सिमुलेटर बारेमा, प्रमुख शब्दहरू मार्फत, सुविधा, समाधान गर्न छिटो पहुँच र एडअन मुद्दाहरू (लगभग 140.000 सन्देशहरू टन्न भरेर र अनुक्रमित)।
यसको एंग्लो-Saxon गरेको समकक्ष (Avsim, FlightSim, एफएस डोम आदि ...) जस्तै तरिकामा, वेबसाइट विशेष गरी जहाँ बेनामी, केही मानिसहरू संलग्न थिए मंच, मा, प्राविधिक मुद्दाहरू वा अन्य समस्या वर्ष साल को धेरै भेट भएको थियो मौखिक excesses; यी अवस्थामा, speculative बुलबुले तर Communicative व्यक्तिहरूलाई मा, छैन।
यो घटना पहिले नै 80 गरेको, यस्तो Carbone 14 रूपमा केही पेरिस मुक्त रेडियो, telephonic अन्तर्क्रिया थालिसकेको थियो जब भयो थियो; telephonic गुमनाम प्रयोग, केही श्रोताहरूलाई आफूलाई यी व्यवहार को तरिका दिनुभयो।
समाधान, मंच गर्न पहुँच सीमित गर्न प्रयोगकर्ताहरूको एक वास्तविक पहिचान मार्फत हुन्छन्। यद्यपि, relentlessness एरिक Bender गरेको (सृष्टिकर्ता) को, Rikoooo.com सबै नहुनु विरुद्ध, डिसेम्बर 2009 मा "फ्रान्स अन्तर" मा एक रेडियो रिपोर्ट, भएको बिन्दु (Carnets डे Campagne / फिलिप बर्ट्रेंड) गर्न बढ्न व्यवस्थित।
सदस्य 'पहिचान प्रकारका त्यहाँ दुनियाँ, रूपमा फ्रान्सेली भाषा बोल्ने देशहरूमा धेरै र पनि अंग्रेजी बोल्ने व्यक्तिहरूलाई मा एक हडताली प्रवेश भन्ने देखाउँछ। आफ्नो फारामहरू, जो सभा र समूहहरू अनुमति दिन्छ अन्य सदस्य, सम्पर्क गर्न तिनीहरूलाई अधिकार सहित सदस्य 'भौगोलिक स्थिति,।
2005 मा एरिक Bender द्वारा बनाइयो, टूलूस (फ्रान्सेली aeronautic ठाउँ) वरिपरि बस्ने, उहाँले विभिन्न विकासकर्ताले गरे हवाईजहाज अपलोड गरेर थाले। उहाँ सधैं तिनीहरूलाई वेबसाइटमा राख्न प्राधिकरणहरू माग्यो।
Rikoooo.com गरेको frequentation नियमित, नोभेम्बर 2008 सम्म बढ्दै छ Bender को "AirFrance प्याक" एउटा निर्णायक झटका प्रहार गर्दा। काम दुई वर्ष को परिणामस्वरूप, यो 270 एमबी प्याकेज एयरलाइन गरेको छिटो को आवश्यक, विश्वभरिका धैर्यपूर्वक पत्ता modellings साथ दिन्छ। पहिले एक FSX उपयुक्त संस्करण अप्रिल9मा प्रकाशित गरिएको छ, FS2010 लागि अपलोड र यी दुई प्याकेजहरू डाउनलोड थिए 113.000 पटक, उच्चतम आंकडा कहिल्यै 300 आज वेबसाइटमा उपलब्ध फाइलहरू बीचमा रेकर्ड गरिएको छ जो। त्यही वर्ष झन्डै दुई लाख डाउनलोड Rikoooo.com उपलब्ध सबै प्याकेजहरू बाहिर उल्लेख गरेका थिए।
हुनुअघि, 2007 को अन्त मा, एरिक Bender एक "लेख" खण्ड मिशेल Lagneau, व्यापार द्वारा प्रशिक्षक, न कारण न त गन्तव्य संग उडान, पनि वस्तुतः खातिर अभिव्यक्ति "कुरा समान छ कि सोच छ जो मार्फत सृष्टि गर्नुभएको थियो, कुरा को ", माथि-उल्लेख केही heritages अनलाइन उडान योजना राख्न 2008 मा सुरु भयो। उहाँको उद्देश्य सिक्ने उपकरण को भन्दा अन्य रूपमा सिम्युलेटर प्रयोग गर्न छ" piloting र हवाई नेविगेशन को शिक्षाप्रद दृष्टिकोण "। एउटा लेखक रूपमा चालीस मार्गहरू माझमा, तिनीहरूलाई केही, यो 20s को "Compagnie Franco Roumaine डे नेभिगेसन aerienne" (CFRNA) को लागि aeronautic फ्रान्सेली इतिहासकार रबर्ट Espérou र Fernande Bonnemain को सहभागिता संग, मिशेल Lagneau सबैलाई शरद ऋतु 2009 समयमा प्रकाशन संग, फ्रेंच र साथ हैरानी 2003 / 2004 उडान सिम्युलेटर 160 (FS2004) संग एक9रोक-बिन्दु विश्व भ्रमण समयमा सृष्टि गर्ने पत्रुस Askovich गरेको लग पुस्तक, लेखक प्राधिकरण। यो 35,000 धन्यवाद दुवै hemispheres भन्दा महत्वाकांक्षी ट्रेक, उसलाई टिप्पणी किलोमिटर र एक साथ जाँदै तस्वीर एल्बम, Askovich, यात्रा को9महिना को लागि एक प्रशंसनीय धैर्य प्रदर्शन, जहाँ यसलाई व्यावसायिक सीमाको छ पीसी खेल श्रेणी देखि यो सफ्टवेयर खींचती। उडान सिम्युलेटर संग एक encyclopedic दृष्टिकोण: मिशेल Lagneau उहाँले भनिएको के को लागि बाटो खोल्ने, को overflown स्थानहरूको बारेमा encyclopedic टीकाओं संग फ्रान्सेली संस्करण सार्थक भयो। तर त्यो भन्दा पहिले, पत्रुस Askovich को "गम्भीर खेल" को एक precursor रूपमा, साथै asRikoooo.com जो फ्रान्सेली विशेष प्रेस मा उल्लेख गरिएको अनुवाद गरेको पाहुना, छ छलफल गर्न सकिन्छ। मिशेल Lagneau "छोटा इतिहास डे l'उड्डयन Sous उडान सिम्युलेटर" पछि वर्ष लेखे।
2011 को पहिलो semester मा, क्यानाडा दाऊदले Malloch र अमेरिकी जिम डगलस संग सहयोग मा, ऊ फेरि Rikoooo.com मा उडान सिम्युलेटर दुई जीवनी निबन्धहरू को प्रकाशन संग innovates। पहिलो एक Quebecer पायलट जाक आर Hebert, र अन्य एक, अष्ट्रेलियन उडान डाक्टर क्लाइड Corwall Fenton, दुवै युरोप मा अज्ञात सम्बन्धित, र हामीलाई फिर्ता 30 गरेको गर्न ल्याउन। दाऊदले Malloch र मिशेल Lagneau ऐतिहासिक जानकारी सङ्कलन गर्न विशेष गरी पियरे Thiffault, क्युबेक मा Aerovision जग लागि इतिहासकार देखि, undertook। जिम डगलस, आफ्नो भाग को लागि, विशेष liveries बनाउन सिम्युलेटर लागि डी Havilland DH 60 Gipsy मथ, दाऊदले Malloch द्वारा सहायता सिर्जना गरियो। यो विमान दुवै प्रश्न पाइलटहरूले प्रयोग र FlightSim.com मा उपलब्ध छ गरिएको थियो।
जुलाई 2011 मा, एरिक Bender एक पूर्ण प्याकेज आफ्नो विचार, त्यो समय संग, हासिल सफलता देख reiterates को एमिरेट्स 'छिटो र घोषणा, आफ्नो इरादा यसरी राख्न। यो एफएस लागि फ्रीवेयर विकास क्षेत्रमा मात्र उदाहरण। यो Bender सामान्यतया "payware एडअन" अघि भेटिएन केही एअर सुविधाहरू फिटिङ द्वारा "फ्रीवेयर" र "payware" को बीच अंतर कम गर्न खोज्छ जहाँ मिश्र एयर गरेको छिटो संग 16th नोभेम्बर 2011 मा पूरा।
समय जान्छ रूपमा लागि निःशुल्क एरिक Bender धेरै मानिसहरूलाई मदत। 2010 को सुरुमा, एडी Belfiore, भर्चुअल पायलट र भिडियो निर्माता, Askovich गरेको उडान योजना प्रेरित एक पूर्ण चलचित्र थाले र एरिक Bender Rikoooo.com को, सधैं स्वेच्छाले, प्रशासक रूपमा साथ दिए। स्वयंसेवक सञ्चालकहरू व्यवस्थित मंच, विभिन्न खण्डहरू छन्; प्रत्येक एक यथार्थ विषय छ, र यो आन्तरिक आन्दोलनहरु एक विमानस्थल (टर्मिनल र ढोकाहरू) जस्तो। यो सदस्यहरु द्वारा बनाईएको हो जो आफूलाई चर्चा समूह, छ, तर पनि एक "फोटो" खण्ड (3000 तस्वीर) र एक "भिडियो" एक (1000 भिडियो), जो आफ्नो realizations प्रस्तुत गर्न सदस्यहरूलाई प्रस्ताव। 120 000 जडानहरू प्रत्येक महिना किनभने सदस्यहरू एउटा समाचारपत्रको द्वारा जानकारी छन्, नयाँ Add-on अनलाइन putted झनै गर्दा साथ प्रत्येक दिन 2000 सम्म औसत मा लिपिबद्ध छन् र। वेबसाइट 80,000 मान्छे, औसत मा 1000 नयाँ दर्ता प्रत्येक महिना, कहिलेकाहीं 2000 संग,3नयाँ Add-on मासिक5दर्ता भएको छ। वेबसाइट एयर र स्पेस र पावलले Lengellé (1908-1993) को एक योग्य उत्तराधिकारी को एक सरकारी चित्रकार छ जो जीन-पियरे मिशेल गरेको चित्रहरू, एक स्थायी प्रदर्शनी प्रस्तुत। यो एक पूर्ण विभिन्न सामग्री छ, तर ठूलो एक, जब अन्य वेबसाइटहरु "बस" एडअन अनलाइन राखे।
कि बावजुद कारण महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू एउटा मूल सामग्री, Rikoooo.com उडान सिम्युलेटर र एक्स-विमान वेबसाइट को सयौं भित्र विशेष मामला, "Ailes Françaises" 100 वर्ष देखि इतिहास के थियो को परम्परा छ।
यो पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गर्ने बर्ड उडान आकर्षण (को Icare मिथक द्वारा सङ्केत) सम्झाउँछ जो प्राचीन समयमा, सबै उमेरका भावुक समुदायमा जन्म दिए जो उत्तर-अमेरिकी पीसी उडान अनुकार आविष्कारक, ब्रुस Artwick, गर्न tributes। तर उहाँले पहिलो उडान मोडेल सिर्जना गर्दा कि सोच्न सक्छ? यो उड्डयन पनि precursors गर्न tributes; को राइट दाजुभाइ, Clement Ader, र धेरै अन्य रूपमा: सूची लामो छ।
उडान सिम्युलेटर गरेको प्रतियोगी एक्स-विमान, अमेरिकी अस्टिन मेयेर (Laminar अनुसन्धान) 1988 द्वारा सिर्जना, कि लगभग दस वर्ष ब्रुस Artwick पहिलो परीक्षण पछि भन्न छ। तुरुन्तै, मेयेर बौद्धिक म्याक, लिनक्स र विंडोज, माइक्रोसफ्ट विपरीत केवल Windows अन्तर्गत एफएस गर्ने सिर्जना अन्तर्गत आफ्नो सिम्युलेटर प्रस्तावित गर्ने निर्णय गरे। एक "squabble", भयो केही विकासकर्तालाई आफूलाई भन्दा प्रयोगकर्ता द्वारा ज्यादातर नेतृत्व। उडान सिम्युलेटर, किनभने आफ्नो पूर्वता को, चाँडै दुनियाँ किनभने हवाईजहाज (पुरानो या नवीनतम) र पूरक sceneries हामी यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर को फैलाउन थियो: साल वर्ष हामीले त्यहाँ एउटा स्पष्ट वास्तवमा हो भनेर भन्न सकिन्छ। दुर्भाग्यवश, एक्स-विमान यो मामला मा छ। तर आफ्नो निर्माता अस्टिन मेयेर उहाँले निरन्तर नयाँ संस्करणका आफ्नो सिम्युलेटर अपडेट, निराश छ। 2010 को शुरुवात पछि देखि Rikoooo.com राखिने चाहन्थे रूपमा तरिका यो तुच्छ युद्ध, एक्स-विमान9प्रदर्शन दिइयो अनलाइन फारम। पहिलो semester 2012 समयमा, उहाँले कुन पावलले Glanville गरेको Airbus A9 आए एक्स-विमान 320 लागि एक स्वचालित स्थापनाकर्ता सिर्जना गरियो। एक्स-विमान 10 लागि एक स्वचालित स्थापनाकर्ता आउँदै छ, र विभिन्न डेवलपर्स संग सम्पर्क थप एक्स-विमान एडअन प्रस्तावित गर्न, मा जानुहोस्। एकै समयमा, एफएस एडअन एक भरपर्दो दरमा जारी लाइन मा-राख्दै: हामी टिम पिग्लेट Conrad गरेर Embraer एक-29B सुपर Tucano र ग्लेन जनसन द्वारा लस एन्जलस अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा (KLAX) दृश्यहरु, याद गर्न सक्नुहुन्छ धेरै बीचमा 2012 को पहिलो भाग समयमा अन्य व्यक्तिका। डिसेम्बर 16th 2011 मा, Rikoooo.com सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा खाता सिर्जना गरियो। शराबी गरेको लक्ष्य सदस्यहरु संग एक स्थायी सम्पर्क कायम गर्न, तर पनि विश्वव्यापी वेबसाइट बढाउन छ। 2012 समयमा, एक नयाँ फोटो प्रतियोगिता, थोमस Guiart (tomxsg) द्वारा व्यवस्थित सिर्जना गरिएको थियो। हरेक हप्ता नयाँ विषय प्रस्तावित छ र सदस्यहरु मतदान र विजेता आफूलाई चयन गर्नुहोस्। "Simureal" यो चुनौती समावेश श्रृंखला, विशेष उल्लेख योग्य: एउटै साप्ताहिक दर संग, एउटा वास्तविक aeronautic फोटो प्रकाशित छ र भर्चुअल पाइलटहरूले आफ्नो सिम्युलेटर संग रूपमा विश्वासीपूर्वक सकेसम्म यसलाई उर्तानु छ। यी अनुकूल प्रतियोगिताहरु समयमा प्रकाशित यी शट, साथ, हामी परम्परागत फोटोग्राफी कम्प्युटर हावा सिमुलेशन अभिन्न भाग हो भनेर बुझ्न। मिशेल Lagneau उडान सिम्युलेटर संग पुनर्स्थापना गर्न आफ्नो अन्वेषण र व्यावसायिक उड्डयन को मिलाइएको जारी छ। पहिलो semester 2012 समयमा प्रकाशित दस मार्गहरू बीच, हामी साहित्यिक सम्पदाको देखि आ नयाँ मिलाइएको मई मा फेला। यो पुस्तक «लामो बाटो घर» अमेरिकी एडमन्ड «एड» डोभर, पैन अमेरिकी एयरवेज लागि एक पूर्व रेडियो अधिकारी द्वारा देखि, "l'Incroyable Randonnée डु प्रशान्त क्लिपर Language Sous उडान सिम्युलेटर" छ। यो पुस्तक एक Seaplane को प्रामाणिक र अज्ञात (युरोप मा) कथा बताउँछ, यो Boeing 314, डिसेम्बर 7th 1941, पर्ल हार्बर मा आश्चर्य आक्रमणको त्यसै दिन मा नयाँ-न्यूजील्याण्ड मा booby-फन्दामा नै विमान, को। प्रशान्त महासागर मार्फत फिर्ता क्यालिफोर्निया जाने dangerousness को दृश्य, पान हूँ फिर्ता अष्ट्रेलिया, एशिया, मध्य-पूर्व, अफ्रीका र अटलांटिक महासागर माथि उडान चालीस टन बहुमूल्य उडान लाइनर ल्याउन गर्न चालक दल आदेश दिए। ठाउँ रोक पछि ठाउँ रोकिँदै, हामी अष्ट्रेलियन विकासकर्ता ब्रुस Kennewell टीकाओं गर्न यात्रा धन्यवाद पालना गर्नुहोस्। मिशेल Lagneau गरेको अध्याय चतुर्थ निकाल्ने अनुवाद, को पाठ्यक्रम संग लेखकको प्राधिकरण संग Embellished। जाक आर सम्बन्धमा जीवनी निबन्धहरू पछि Hebert र क्लाइड कर्नवाल Fenton, यो Rikoooo.com संग बाहिर एक ऐतिहासिक connotation संग तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग छ। यो पहिलो semester 2012, एरिक शराबी, एटलस-नीलो गरेको जुन शाही एयर Maroc गरेको को 14th, र Jet4you गरेको बेडे FSX लागि अनलाइन राख्दछ एक मुक्त डाउनलोड रूपमा पाठ्यक्रम फलिफाप अन्त्य गर्न।
नयाँ सिम्युलेटर आफूलाई बारेमा, जुन3मा अमेरिकी कम्पनी लकहीड-मार्टिन निगम, को aeronautic क्षेत्रमा दुई ज्ञात नाम द्वारा शुरू भएको थियो जो Prepar2010D, कुरा हुन्छ। मा 6th संस्करण मार्च 2012 मा प्रकाशित। आफ्नै सिमुलेशन सफ्टवेयर विकास गर्न लकहीड-मार्टिन माईक्रोसफ्टका FSX लाइसेन्स फिर्ता किनेको छ। एरिक Bender गरेको राय मा: "Prepar3D एक FSX दोस्रो संस्करण, लोकप्रिय र भविष्य छ! (...) FSX एडअन उपयुक्त र विपरित तिनीहरूले नै आधार छ किनभने, Prepar3D गरेको मामला मा Prepar3D छन्, सुधार "। यो र उडान गरेको विफलता अनुसार (माइक्रोसफ्ट नयाँ सिम्युलेटर फेब्रुअरी 2012 मा शुरू तर3महिनापछि त्यागेर), FSX को स्थायी बहुमुखी एडअन अनलाइन Prepar3D संग राख्नु Bender निर्णय गरे। एकै पटक मा, AirFrance गरेको छिटो को दोस्रो संस्करण SkySpirit2012 गरेको CRJ1000 (कुनै कुलपति) र अब AirFrance काम जसले पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री घोषणाहरू समावेश गरिनेछ जो, तयार छ। फोटो प्रतियोगिताहरूमा एक वास्तविक सफलता रूपमा, Thoms Guiart (tomxsg) शरद ऋतु / जाडो 2012 दुई ठूलो प्रतियोगिताहरूमा (पोस्टकार्ड र शीतकालीन जादू) पुरस्कार रूपमा जयस्टिक्स छ जो Saitek संग एक साझेदारी, संग समयमा सङ्गठित। दुवै प्रतियोगिताहरु न्यायाधीशहरूले लागि एक वास्तविक टाउको दुखाइ थियो जो 100 र 200 प्रतियोगिहरु बीच अप कल। अन्यथा, प्रत्येक प्रतियोगिता को शीर्ष 20 भर्चुअल फोटोग्राफी उचित कला भए भनेर देखाउँछ।
2011 सबै excesses (सकारात्मक वा नकारात्मक) को वर्ष भएको थियो भने, 2012 एक धीमा प्रगति, खुला-दिमाग सबै सिमुलेशन रुझान गर्न देखे।
थमस Guiart (tomxsg) सह-प्रशासक, Mathieu Fédiakine (Absolam) Rikoooo गरेको ग्राफिक्स कलाकार र Rikoooo गरेको लोगो निर्माता र अन्य दृश्यहरू, Laurent Lepot (Wolf2013) सबैभन्दा: यो नयाँ वर्ष 29 को सुरुतिर मा, एरिक Bender संग काम टोलीमा द्वारा बना छ पुरातन सञ्चालक र adviser, JULIEN (Moustikblanc31) सञ्चालक र adviser तर पनि एक वास्तविक पाइलट, वैलेन्टिन Witon (Airlink) र जेरोम (jejetoulouse) सहायक सञ्चालकहरू र सल्लाहकारहरू। र पाठ्यक्रम मिशेल Lagneau (michel95) जो, पाँच वर्ष यता उडान सिम्युलेटर अन्तर्गत व्यावसायिक उड्डयन इतिहास छाँटकाँट गर्न आफ्नो परियोजना pursues।
एक निष्कर्षमा, हामीले एरिक Bender र आफ्नो साझेदार निम्न विचार संग कि इच्छा हुनुपर्छ: हामी अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ जो भर्चुअल उड्डयन, निम्न, इन्टरनेट संग सम्बन्ध मा कम्प्युटर सबै प्रविधिहरू प्रयोग, यो शक्ति कल्पना, र कसरी यो ' केही वर्ष मा हुनेछ।